Nhau - Global Premium Stroller uye Stroller Musika mu2020-Mhedzisiro yeCOVID-19, Yemberi Yekukura Kuongorora uye Matambudziko
Iyo "2020 Global High-end Stroller uye Stroller Musika Yekutsvaga Ripoti" inoongorora chimiro cheindasitiri uye tarisiro kumatunhu makuru zvakadzama zvichienderana nevatambi vakakosha, nyika, zvigadzirwa mhando uye ekupedzisira maindasitiri. Rondedzero iyi yekutsvaga inopa ongororo yakazara yezvikamu zvemusika, senge mikana yemusika, kupinza uye kutumira kunze kwenyika, musika musimba, vagadziri vakuru, huwandu hwekukura uye matunhu makuru. Iyo yepasi rose premium stroller uye stroller musika wekutsvaga mushumo unosanganisira ruzivo rwunopihwa zvinoenderana nemugadziri, dunhu, mhando uye kunyorera.
Sekureva kweshumo, iyo Pramu yePrimamu neBaby Stroller musika ichakura padanho rekukura pagore rexx% panguva yekufungidzira (2019-2027), uye ichapfuura kukosha kweUS $ XX pakupera kwa2027. musika unopa makambani profiles eakakosha makiyi, kusanganisira mafambiro epamberi, ruzivo rweanokwikwidza mamiriro, uye yakakosha mamiriro ekuvandudza matunhu.
Denda reCovid-19 rakakanganisa zvakanyanya hupfumi hwenyika dziri kusimukira uye dzichiri kusimukira. Chirevo ichi chinotsvaga kuferefetwa kwemubhadharo wemari, kukanganiswa muketani yakajairwa uye masuo achangobva kuvhurwa, kuongororwa kwakazara kwezviitiko zvebhizinesi, mepu yemasuo achangovhurwa, nezvimwewo mhinduro dzakasiyana uye nzira dzekudzosa dzinopihwawo kugadzirisa denda re COVID-19.
Global Premium Stroller uye Stroller Musika Chikamu Chikamu: Mumwe Anofambisa, Akawanda Stroller
Yepasi rose-yekupedzisira stroller uye yecheche stroller musika sekisheni application: 9 mwedzi pasi pemwedzi mipfumbamwe kusvika pamwedzi makumi maviri nemana makumi maviri nemana